Dastabej » कहाँ हराए सीमास्तम्भ ?
कहाँ हराए सीमास्तम्भ ? – Dastabej
कहाँ हराए सीमास्तम्भ ?
गुलरिया नगरपालिका महम्मदपुरका सुन्दर गुप्ता भन्छन्,‘सीमाको सुरक्षा सरकारले होईन हामीले गरेका छौँ ।’
बाँके । नेपाल—भारत सुरक्षा अधिकारीको काउन्टरपार्ट बैठकमा प्रमुखताका साथ उठ्ने मुद्दामा सीमास्तम्भ दुई मुलुक अधिकारीहरुले हराएका सीमास्तम्भको खोजि, जिर्णको मर्मत गर्न आफ्ना सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय हुन्छ । तर कार्यान्वयन नहुँदा नेपाली भूमि विवादमा पर्नेे गरेको हो । खासगरी नदीले कटान गर्ने क्षेत्रमा सीमा विवाद बल्झिदो छ । त्यसो त बर्दियाको गुलरिया र राजापुर नगरपालिकामा दशकौंदेखि सीमालाई लिएर विवाद हुने गरेको हो । सीमालाई लिएर सीमावर्ती स्थानीयबीच कैयौं पल्ट तनाव भइसकेको छ । तर पनि सरकार संबेदनशिल नबन्दा सीमा विवाद बल्झिदै आएको हो । ‘दशगजा विवाद अहिलेको होईन । जान्ने भएदेखि सुन्दै आएका छौ,’ भारतको सीमासंग जोडिएको गुलरिया नगरपालिका महम्मदपुरका सुन्दर गुप्ता भन्छन्,‘सीमाको सुरक्षा सरकारले होईन हामीले गरेका छौँ ।’ उनले सीमा विवाद बारे सरकार संबेदनशिल नहुँदा अतिक्रमण भइरहने बताए ।
सीमास्तम्भ राख्ने र मर्मत गर्ने अधिकार केन्द्रीय सरकारलाई मात्रै छ । सीमास्तम्भबारे दुई मुलुकका सरकारबीच छलफल हुनुपर्छ । त्यसपछि सामूहिक रूपमा अनुगमन गरिन्छ । संयुक्त टोलीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा नापी, मालपोत र बिज्ञसहितका दुई मुलुकका प्राविधिक टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेपछि मात्र मर्मत गरिन्छ । सीमास्तम्भ मर्मत महँगो हुने र लामो प्रक्रिया लाग्ने हुँदा समस्या देखिने गरेको हो । त्यसका लागि दुई मुलुकका नापी प्राविधिक आवश्यक पर्छन् । दुई पक्षको सहमतिमा हराएको स्थानमा नयाँ सीमास्तम्भ र जीर्णको मर्मत गर्न सकिन्छ ।
दुवै मुलुकको सहमति अनुसार भारतीय पक्षले आफ्नो तर्फको जीर्ण सीमास्तम्भ मर्मत गरिसकेको छ । तर, नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा भने सीमास्तम्भ मर्मत परेको छैन । नेपालले बेजोड र भारतले जोड अंकको सीमास्तम्भ मर्मत गर्ने सहमति भएको थियो । भारतीय पक्षले बाकेको सीमामा रहेको ६१८ र बर्दियाको ८२ नम्बरको सीमास्तम्भ मर्मत गरिसकेको छ । तर, नेपालले गर्ने भनिएको बा“केको ५२५, ६२३ र बर्दियाको ९४ नम्बरको सीमास्तम्भ मर्मत हुन सकेको छैन । बर्दियामा दुइटा सीमास्तम्भ मात्र मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले एक–एक वटा बाँडिएको थियो । अतिजीर्ण सीमास्तम्भ मर्मत गर्न स्थानीय प्रशासनले गृह मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गर्दै आएको छ । तर, केन्द्रले त्यसको कुनै सुनुवाइ गरेको छैन । अधिकारीबीच छलफल हुन आवश्यक छ । हराइसकेको स्थानमा नया“ सीमास्तम्भ राख्दा दुई मुलुकका अधिकारीको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने सहमति छ । सीमास्तम्भ हराएपछि नेपाली भूमि अतिक्रमण चपेटामा पर्ने गरेको हो ।
के हो दशगजा ?
दुई मुलुकको सीमा छुट् याउन नेपाल–भारत सरकारलेले १०÷१० गज जग्गा सीमा छुट्याउनका लागि दिएपछि नो म्यान्स ल्याण्डलाई दशगजा भन्ने गरिएको हो । नेपाल—भारत सीमा छुट्याउने मुख्यस्तम्भलाई जंगे पीलर भनिन्छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको पालामा राखिएकाले स्थानीयले स्तम्भको नामाकरण जंगे राखेका हुन । विसं १९१४ मा भारतमा भएको सिपाही विद्रोह दबाउन राणाले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सहयोग गरेका थिए । त्यसबापत १८७३ को सुगौली सन्धिबाट गुमेको भूभागमध्ये पुरस्कारस्वरूप १९१७ मा बा“के, बर्दिया, कै लाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता आयो । यि जिल्लालाई नयाँ मुलुक भनिन्छ । नयाँ मुलुक र भारतबीचको सीमा छुट्याउन पिलर राखियो हो ।
२७ जेष्ठ २०७८, बिहीबार १४:४८ प्रकाशित